Shiinaha Shiinaha warshad soo saarta jeermiska-bacriminta iyo soosaarayaasha | Dingtaisheng
Xakamaynta heerkulka saxda ah, qaybinta kuleylka ee aadka u fiican
Module xakamaynta heerkulka (nidaamka D-TOP) ee ay soo saartay DTS wuxuu leeyahay ilaa 12 marxaladood oo heerkulka lagu xakameynayo, talaabada ama qumanaanta waxaa lagu dooran karaa iyadoo la raacayo alaabooyin kala duwan iyo habka habka kululaynta habka, sidaa darteed soo noqnoqoshada iyo xasiloonida udhaxeysa alaabada si fiican ayaa loo kordhiyaa, heerkulka waxaa lagu xakameyn karaa gudaha ± 0.5 ℃.
Xakamaynta cadaadiska saxda ah, oo ku habboon noocyo kala duwan oo baako ah
Qeybta xakamaynta cadaadiska (nidaamka D-TOP) ee ay soo saartay DTS waxay si isdaba joog ah u hagaajinaysaa cadaadiska inta lagu gudajiro nidaamka oo dhan si loogu waafajiyo isbeddelada cadaadiska gudaha ee baakadaha wax soo saarka, sidaa darteed heerka cilladaha baakadaha wax soo saarka ayaa la yareeyaa, iyadoo aan loo eegin weelka adag gasacadaha, daasadaha aluminiumka ama dhalooyinka caagga ah, sanduuqyada balaastigga ah ama weelasha dabacsan ayaa si fudud loo qancin karaa, cadaadiskana waxaa lagu xakamayn karaa ± 0.05Bar.
Aad u nadiifi baakadaha wax soo saarka
Isweydaarsiga kuleylka waxaa loo isticmaalaa kuleylinta iyo qaboojinta aan tooska ahayn, si markaa uumiga iyo biyaha qaboojiyaha aysan ula xiriirin biyaha howsha. Waxyaalaha wasakhda ah ee uumiga iyo biyaha qaboojinta looma keenayo dib u celinta jeermiska, taas oo ka hortageysa wasakhda labaad ee badeecada oo aan u baahnayn kiimikooyinka lagu daweeyo biyaha (Looma baahna in lagu daro koloriin), iyo nolosha adeegga kuleyliyaha sidoo kale waa si weyn loo kordhiyay.
U hoggaansanaanta shahaadada FDA / USDA
DTS waxay khibrad u leedahay khubaro xaqiijinta kuleylka ah waxayna xubin ka tahay IFTPS Mareykanka. Waxay si buuxda ulashaqeeysaa hay'adaha xaqiijinta kuleylka ee dhinac saddexaad ee ay ansixisay FDA. Khibrada macaamiisha badan ee Waqooyiga Ameerika waxay ka dhigtay DTS aqoon u leh shuruudaha sharciyeynta FDA / USDA iyo tikniyoolajiyadda nadiifinta ee ugaarsiga.
Kaydinta tamarta iyo ilaalinta deegaanka
> Qaddar yar oo biyo ah ayaa si dhakhso ah loogu wareejiyaa si dhakhso leh u gaadho heerkulka jeermiska ee la adkeeyay.
> Qaylada hoose, abuur jawi deggan oo deggan oo shaqeysa.
> Si ka duwan nadiifinta nadiifinta uumiga, looma baahna in la iska baxo ka hor kululaynta, taas oo si weyn u badbaadinaysa luminta uumiga waxayna badbaadineysaa 30% uumiga.
Ku rid badeecada meertada jeermiska looga dhaliyo oo albaabka ka xir. Albaabka jawaab celinta waxaa lagu xaqiijinayaa iyadoo la ilaalinayo seddex geesood oo nabadgelyo ah. Dhamaan howsha oo dhan, albaabku si farsamaysan ayuu u xiran yahay.
Nidaamka nadiifinta ayaa si otomaatig ah loo fuliyaa iyadoo la raacayo habka loo soo gudbiyo ee ku saabsan xakamaynta micro-processing processor PLC.
Ku hay qaddar biyo ah oo ku habboon salka galka. Haddii loo baahdo, qaybtaan biyaha ah si otomaatig ah ayaa loogu duri karaa bilowga kululaynta. Alaabada kulul-buuxsan, qaybtaan biyaha ah waxaa lagu sii kululayn karaa marka hore haanta biyaha kulul ka dibna waa la isku mudayaa. Intii lagu gudajiray howsha nadiifinta oo dhan, qeybtaan biyaha ah waxaa si isdaba joog ah ugu wareegaya mashiinka tuubada biyaha qeybisa iyo burooyinka loo qeybiyo soo celinta, biyahana waxaa lagu buufiyaa qaab ceeryaamo ah waxaana si siman loogu qeybiyaa dib u celinta si loo kululeeyo badeecada. Tani waxay hubineysaa xitaa qaybinta kuleylka.
Qalab ka beddel kuleylka kuleylka ah ee tuubbada jeermiska ka dhasha, iyo heerarka kululaynta iyo qaboojinta, howsha biyuhu waxay martaa hal dhinac, oo uumiga iyo biyaha qaboojintu waxay ka gudbaan dhinaca kale, si sheyga jeermiska looga nadiifiyay uusan toos ula xiriirin uumiga iyo qaboojinta biyaha si loo ogaado kuleylka iyo qaboojinta aseptic.
Inta hawsha socoto oo dhan, cadaadiska kujira soo celinta waxaa xukuma barnaamijka iyadoo quudineysa ama ku sii deynaysa hawo isdabamartay iyada oo loo marayo waalka otomaatigga ah ee loogu talagalay soo celinta. Maaddada nadiifinta ee biyaha lagu buufiyo awgood, cadaadiska ku jira dib-u-celinta saamayn kuma yeelanayso heer-kulku, cadaadiskuna si xor ah ayaa loo dejin karaa iyadoo la raacayo baakadaha alaabooyinka kala duwan, taasoo ka dhigaysa qalabka mid si aad ah loogu dabaqi karo (daasadaha saddexda ah, laba gasacadood, jajaban baakadaha baakadaha, dhalooyinka dhalada ah, baakadaha caagga ah iwm).
Markay hawsha jeermiska taranka la dhammeeyo, waxaa la soo saarayaa baaqa digniinta. Waqtigaan, albaabka waa la furi karaa waana la dejin karaa. Kadib u diyaar garow inaad nadiifiso qaybta xigta ee alaabta.
Isku mid ahaanta heerkulka qaybinta ee soo noqoshada waa +/- 0.5 ℃, cadaadiskana waxaa lagu xakameynayaa 0.05Bar.
Daasadda daasadda Aluminium
Dhalada Aluminium Dhalooyinka caaga ah, koobabka, sanduuqyada, baakadaha
Dhalooyinka quraaradaha, gasacadaha Kiish baakad dabacsan
Xidhmada xirmada dahaarka (Tetra recart)
Beegsiga la qabsashada
Cabitaannada (borotiinka qudaarta ah, shaaha, kafee): Daasadda ayaa daadan kara; Aluminium awood; Dhalada Aluminium; Dhalooyinka caagga ah, koobabka; Dhalooyinka dhalada ah; Kiish baakad dabacsan
Waxyaalaha caanaha laga sameeyo: gasacadaha; dhalooyinka caagga ah, koobabka; dhalooyinka quraaradaha; bacaha baakadaha dabacsan
Khudaarta iyo miraha (boqoshaada, khudradda, digirta): qasacadaha daasadaha; dhalooyinka quraaradaha; bacaha baakadaha dabacsan; Dib-u-dhiska Tetra
Hilibka, digaagga: daasadaha daasadaha; daasadaha aluminium; bacaha baakadaha dabacsan
Kalluunka iyo cuntada badda: qasacadaha daasadaha; daasadaha aluminium; bacaha baakadaha dabacsan
Cunnooyinka carruurta: daasadaha daasadda; dhalooyinka dhalada ah; bacaha baakadaha dabacsan
Cunnooyinka diyaarka u ah in la cuno: suugooyinka kiishka; bariis kiish ah; baakado caag ah; baakadaha aluminium
Cunnada xayawaanka: qasacadaysan; saxaarad aluminium ah; saxaarad caag ah; bacda baakadaha dabacsan; Dib-u-dhiska Tetra
Xiga: Cascade retort
Uumi Bixinta Cuntada Uumeeyaha Buufin Autoclave Bacriminta
Dib-u-celinta Biyo-Yarida Buufinta Bacriminta